7 Tilmaamood oo wax ku ool u ah Suuqgeynta Kuubanka Dijital ah | Martech Zone
7 Tilmaamood oo wax ku ool u ah Suuqgeynta Kuubanka Dijital ah
Isniin, Maarso 23, 2015 Douglas Karr
Saaxiibka wanaagsan Adam Small wuxuu leeyahay a madal suuq geynta qoraalka taasi waxay u aragtaa qiimaha madax furashada cajiibka ah ee ku saabsan soo jeedinta qoraalka SMS. Hal farsamo ayuu ii sheegay oo ku saabsan macmiilkaas oo bixiyay a keen saaxiib ku siiso meeshii aad ka heshay ruxitaan bilaash ah markaad saaxiib u keentay dhismaha. Waxay diri lahaayeen qoraalka nus saac kahor qadada waxaana jiri lahaa khad albaabka ka baxa. Waa fikrad aad u fiican maxaa yeelay kaliya ma bartilmaameedsaneysid qof ku boodaya sicir-dhimista, waxaad helaysaa ilaaliye cusub oo isku dayaya inuu cuntadaada tijaabiyo!
Midab leh, oo ah kan ugu horreeya daabacaadda kaararka Kanada, wuxuu soo saaray infographic loo yaqaan Kuuboonada Dijital ah ayaa wata Mobaylka iyo Iibinta Omni-Channel kaas oo ku dhex maraya adeegsiga iyo tirakoobka la xidhiidha istaraatijiyadaha suuq geynta kuubanka dhijitaalka ah Infographic wuxuu bixiyaa kuwan 7 Tilmaamood oo wax ku ool u ah Suuqgeynta Kuubanka Dijital ah:
Ku milmaan Emailka - Hubso in kuubannada dhijitaalka ah ay dhexgalaan emailka macaamiishaada. Qabsashada cinwaanka emaylka waxay ku siinaysaa fursad aad si joogto ah ugu cusbooneysiiso waxyaabaha gaarka ah iyo qiimo dhimista sidoo kale!
Ku dar Rafcaanka Muuqaalka - Ku dar astaantaada ama sawirrada badeecadaha oo leh midabyo midabyo dhalaalaya leh iyo xarfaha farta ku ridaya macaamiisha.
Macaamiisha Bartilmaameedka ah - Iyada oo la bartilmaameedsanayo juquraafi ahaan, ganacsiyada ayaa awood u leh inay ka faa'iideystaan ​​goobta macaamiisha si ay u keenaan rasiidhada markay u dhow yihiin!
Iskaashi lala yeesho qaybiyaha - Adeegyada kuuboonku waxay leeyihiin fursado qaybsi ballaadhan oo lagu ballaadhin karo gaadhistaada.
Adeegso Farriinta Qoraalka - U samee barnaamij macaamiisha iyaga ka dhigaya inay dareemayaan inay qayb ka yihiin naadi gaar ah oo aad siiso dalabyo u gaar ah.
Dhiirrigelinta Wadaagista - Ku dar badhannada warbaahinta bulshada si aad ugu oggolaato hal-guurin wadaagid guud ahaan barnaamijyada warbaahinta bulshada.
Cabir Natiijooyinka - Maaddaama dallacsi kastaa uu gaadhayo taariikhda uu dhacayo, fiiri waxa shaqeeya iyo wixii aan shaqeynin oo u roonow ololahaaga dambe.
Tags: couponsuuq geyntakuuboon dijitaal ahiibinta kuubanka dhijitaalka ahkuubannada emaylka ahrasiidhyada wargeysyadaSMSsms kuuboonadasms dhimisnaadiyada qoraalkakuuboonada farriinta qoraalkadhimista farriinta qoraalkafarriin qoraal ah ayaa la bixiyaafariin qoraal ahvalpak
Maxay Dadku U Joojiyeen Raacista Magacaaga?
Dhegeyso oo Bartilmaameed Fursadaha on Twitter oo leh SocialCentiv